Cut Ying Apk Download ho an'ny Android [2022 Update] | APKOLL
Salama daholo, eto izahay miaraka amin'ny fampiharana Android mahatalanjona hafa ho anao rehetra. Te hampiasa ny mpamoaka horonantsary tsara indrindra amin'ny sehatra media sosialy ve ianao? Raha eny, dia eto izahay miaraka amin'i Cut Ying Apk. Io no rindrambaiko Android Editor Video farany manova ny clip misy fitaovana tsara indrindra.
Ny fanovana video dia iray amin'ireo zavatra malaza indrindra amin'ny sehatra media sosialy. Noho izany, nieritreritra ny hanome anao ny fampiharana farany izahay. Araka ny fantatrao fa misy fampiharana maro eny an-tsena, izay manolotra ireo serivisy ireo. Saingy matetika, tsy maintsy mividy fonosana premium ianao.
Tsy mandeha ny fampiharana kinova maimaimpoana. Ka nitondra ity rindrambaiko ity izahay, izay maimaimpoana tanteraka ary manasongadina endrika an-taonina. Ireo fiasa omena rehetra dia mandeha tsara. Notsapainay tamin'ny fitaovana marobe izany, aorian'izay dia mizara ity app ity izahay.
Misy endri-javatra mahavariana kokoa amin'ity rindranasa ity. Hizara an-tsipiriany azy ireo aminao izahay. Noho izany, raha te hampiasa an'ity rindranasa ity ianao dia tokony ho fantatrao mialoha ity fampiharana ity alohan'ny hampiasanao azy. Mijanona fotsiny aminay ary fantaro ny momba an'izany.
Topimaso momba ny Cut Ying Apk
Izy io dia rindrambaiko Android maimaim-poana, izay novolavolain'ny GameSmileStudio. Manolotra ny fitaovana farany amin'ny alalàn'ny, izay ahafahanao manamboatra mpamoaka horonantsary tsara. Manolotra sivana, vokany ary fitaovana maro be kokoa hanamboarana sary manintona sy mamorona izy.
Tsy sarotra ny manao video na clip fa ny tena izy dia ny fanaovana clip manintona sy mamorona. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy ho mpamoaka horonantsary matihanina ianao na afaka mampiasa tsotra izao ity fampiharana ity, izay manome anao fidirana malalaka amin'ireo fiasa rehetra.
Video Editor manome ny sivana farany, izay azonao ampiana amin'ny clip rehetra ary manova ny loko lehibe. Hahasarika ny horonan-tsarinao izany. Ny vokatra dia azo ampiasaina hanehoana zavatra mahaliana, hanaovana izany dia azonao atao koa ny mampiasa vokatra mamirapiratra sy maizina miaraka amin'ny clip-nao.
Ny sticker dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra hilazana ny lohateny lehibe na teny amin'ilay clip. Ka dia manolotra anao famoriam-piraikitra tsara, izay azonao ampiasaina mandritra ny fanovana. Manolotra fivarotana an-trano izy io, izay ahafahanao manavao ny sivana vaovao, ny effets, ny sticker ary ny hafa.
Izy io dia manolotra fivarotana mozika naorina izay azonao ampiasaina ho mozika lafika ho an'ny clip-nao. Izany no iray amin'ireo fomba tsara indrindra sy malaza indrindra mba hahatonga ny horonan-tsary ho mahasarika kokoa. Ny fampiasana mozika tsara no fomba tsara indrindra hampitomboana ny mpijery anao.
Raha efa nampiasa Capcut China Apk ianao dia mora kokoa ho anao izany. Ireo roa ireo dia mitovy amin'ny tsirairay, fa tsy maintsy mividy endri-javatra premium any Capcut ianao. Fa fampiharana maimaim-poana tanteraka izany.
anarana Tapaho i Ying
Anaran'ny fonosana com.lemon.lv
Developer Bytedance Pte Ltd.
Endri-javatra manan-danja amin'ny Cut Ying App
Notanisainay taminay ny sasany tamin'ireo fiasa tao amin'ilay fizarana etsy ambony, saingy misy zavatra bebe kokoa ho hitanao momba ity fampiharana ity. Azonao atao ny mizaha azy ary azonao atao koa ny manonona azy ireo ao amin'ny faritra maneho hevitra etsy ambany. Ao amin'ny lisitra eto ambany dia hizara endri-javatra lehibe aminao izahay rehetra.
Sivana farany, effets, sticker ary maro hafa
Fizarana media sosialy
Rafitra tonon'ny hoditra
Ahoana ny fomba fampidinana ny Cut Ying Apk?
Raha te haka an'ity fampiharana ity ianao dia mila mitady ny bokotra fampidinana amin'ity pejy ity. Ho hita eo amin'ny farany ambony sy ambany amin'ity pejy ity. Mizara rohy azo antoka sy miasa amin'ity fampiharana ity izahay, rehefa avy nanandrana izany tamin'ny fitaovana maro. Koa aza misalasala manindry ny bokotra fampidinana.
Cut Ying Apk no fampiharana tsara indrindra hanovana horonan-tsary rehetra. Izy io dia hamadika horonan-tsary tsotra ho clip mahafinaritra sy mamorona. Noho izany, alaivo ity fampiharana ity ary manomboka manao horonan-tsary ary mampitombo mpanaraka.
Mitsidika hatrany ny Website, ho an'ny fampiharana mahatalanjona kokoa
Sokajy Apps, Video Players & Editors Tags Tapaho i Ying, Cut Ying Apk, Cut Ying App, Video Editor Post Fikarohana